Global Voices teny Malagasy » SARIPIKA : Ireo Olona Any Afovoany Atsinana Sy Afrika Avaratra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Janoary 2014 8:04 GMT 1	 · Mpanoratra Joey Ayoub Nandika Nancy
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Hevitra, Mediam-bahoaka, Saripika
Novambra 2010. Nanapa-kevitra ny hivoaka isan'andro sy haka sary ireo olon-tsy fantatra eny an-dàlam-ben'i New York ny lehilahy iray antsoina hoe Brandon Stanton. Ny hahafantatra azy ireny, hametra-panontaniana vitsivitsy amin'izy ireny ary ny hizara amin'ny aterineto izay tantarainy no tiany hatao. Telo taona aty aoriana, tonga zava-dehibe iray amin'ny aterineto ny saripika amin'ny bilaogy ” Humans of New York ” (Ireo Olon'i New York ) . Miaraka amin'ireo mpikirakira Facebook maherin'ny 2 tapitrisa, dia nisongadina ho azy ho toy ny tranga mahaliana tokony harahina izany.
Natombok'i Salma Hegab, mpitoraka bilaogy sy mpanao gazety sy mpikirakira “multimédia”, 22 taona, nivoaka tao amin'ny Oniversite Amerikana ao Kairo ny Humans of Cairo ( Olon'i Kairo) . Voaforona tamin'ny Novambra 2012 ary efa miisa 3.500 mahery izao ny mpanao “tiako”, ny hanehoana ny maha-samy hafa ny mponina ao Kairo no tanjony. Izao ny nambarany momba izany :
Noforoninà mpaka sary tsy fantatra anarana ( hatramin'izao) tamin'ny 2012 ny Olon'i Ejipta . Tsy misy zavatra betsaka voalaza ary efa am-bolana maro izany no tsy nisy fanavaozana. Nefa mendrika ho topaza-maso izany. Tahaka ny tany Ejypta ihany ny “Olon'i Mansoura “.
Avy ao Iran ihany koa ny “Olon'i Esfahan “, “Olon'iTabriz “, “Olon'i Shiraz “, “Olon'i Ahvaz ” ary “Olon'i Kermanshah “
Noforonina tamin'ny 2012 tamin'ny alàlan'ny fifaninànana sary tany Istambul ny Olon'i Istanbul . Ankehitriny maherin'ny 2.200 ny mpanaraka izany. Izao no nolazain'i Shawn Ryan, ilay mpamorona azy, momba ny tetikasany :
Avy ao Tiorkia ihany koa ny “Olon'i Ankara “, “Olon'i Izmir ” ary “Olon'i Antalya “
Afaka mirehareha noho ny amin'ireo mpankafy azy maherin'ny 20.000 ny Olon'i Tel Aviv . Pejy noforonin'i Erez Kaganovitz tamin'ny 7 Aprily 2012 ary mampifaly ireo vondronà mpankafy mahatoky. Nahoana no misy izy io ? izao no navalin'i Kaganovitz izany : “Isan'ny toerana mahaliana indrindra eto an-tany i Tel Aviv. Tongava ary mifaneraserà amin'ireo olona izay mahatonga azy ho mahaliana.”
Niorina tamin'ny 2012 niaraka tamin'ity fanasàna ity : ‘ Tongava ary mifaneraserà amin'ireo olona izay mahatonga an'i Palestina ho mahaliana fatratra’ ny Olon'i Palestina. Miresaha, miaraha miaina amin-dry zareo.” Avy ao Palestina ihany koa ny “Olon'i Nablus “.
Mbola vao haingana ny Olon'i Jeddah – Arabia Saodita . Vao iray volana izay, vokatry ny fiaraha-miasan'ny mpaka sary roa, i Helmy Alsagaff sy i Sharifa Lee Abdulrahman, izay ” te hizara amin'izao tontolo izao ireo karazan'olona maro samy hafa mahafinaritra ao an-tanàna.”
Avy ao Arabia Saodita ihany koa ny “Olon'i  Riyadh”.
Nanomboka tamin'ny fiaraha-miasanay sy i Mher Krikorian, mpaka sary Libane-Armeniana izay nalaza noho ny fandraisany anjara tamin'ny Beirut Street Photographers (BSP ; Mpaka Sary teny an-dàlam-ben'i Beyrouth) ny Olon'i Libanona . Tato aoriana dia nanatevina ny laharanay i Karim Sakr, mpikambana ao amin'ny BSP ihany koa. Toy ny pejy “Olon'i” rehetra, ny tanjon'ny Olon'i Libanona dia ny ” hankalazana ny fahasamihafana ao Libanona amin'ny alàlan'ny fanehoana ny mponina ao aminy.”
Jereo ny pejin'ny “Olon'i LAU ” nataon'i Noura Andrea Nassar raha te-hahalala bebe kokoa momba ireo mpianatra any Libanona ianao. Noura, mpianatra ao amin'ny Oniversite Amerikana Libane izay tafahaona tamin'i Brandon Stanton tany New York raha ny marina no manan-ko lazaina momba ny tetikasany :
Misolo tena ny Olon'i Tripoli  sy Olon'i Beirut  ihany koa i Libanona.
Herintaona lasa izay no natombok'i Ali Alhasani ny Olon'i Amman . Tetikasanà saripika ” izay mikendry ny haneho ny endriky ny olona manodidina an'i Amman, Jordana fa tsy mijery ny maha-lahy na maha-vavy, ny karazana na ny volon-koditra mba hanaparitahana ny hevitry ny firaisankiana eo amin'ny fiaraha-monina Jordaniana. Noho izany dia nisy mpaka sary hafa nandray anjara tamin'ilay tetikasa .”
Noforonina volana vitsy lasa izay ” ho an'ireo Olon'i Tonizia izay verin'ny fitadiavana andavan'andro ary tsy manam-potoana hisitrahana izany” ny Olon'i Tonizia .
Avy ao Tonizia ihany koa ny pejin'ny “Olon'i Tunis ” noforonin'i Akram Lahouel, Houssem Lamti ary Samar Ouadhani. Efa manana bilaogy ry zareo ‘reo. Fa tsy izay ihany fa azonao jerena ihany koa ny “Olon'i Sfax “.
“Fanomezam-boninahitra kely ny mponin'i Khartoum, Sodàna, sary nalaina teny an-‘arabe taminà fotoana iray” ny Olon'i Khartoum .
I Nasser Billah AlNasseri, mpitsabo sady mpanao gazety tao amin'ny sampan-draharaha fanaovan-gazety frantsay teo aloha, no namorona ny Olon'i Baghdad . Voatery nandao an'i Baghdad izy rehefa natetika nahazo fandrahonana amin'ny maha-mpanao gazety azy.
Vao andro vitsivitsy izay no niandohan'ny Olon'i Syria . Tsy nitonona anarana ilay mpaka sary fa izao no ambarany momba ilay pejy : “Syria, mba hamoahana ny eritreritra miafina ao am-po izay tsy voalaza amin'ny maso, ary voatanan'ny ranomaso very any ankoatry ny tabataban'ny ady. Mba ho velona indray.”
Noforoninà mpaka sary Frantsay antsoina hoe Isabelle izay miaina any Dubai nandritra ny 9 taona lasa teo ny Olon'i Dubai .
Avy any UAE ihany koa ny “Olon'i Abu Dhabi “.
Avy ao Libya ihany koa ny “Olon'i Benghazi “.
Vao volana vitsy izay no niforonan'ny Olon'i Casablanca . Iza ireo mpaka sary ao ambadik'io tetikasa io ? Araka ny tenin-ndry zareo, ” Izahay dia izay mino fa ny hany làlan-tokana ahitantsika ny marina miafina ao anatintsika dia ny fandehanana manatona ny olona, mampitaha ny lasantsika ary maka lesona avy amin'ny traikefan-dry zareo.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/01/22/56132/
 eto : http://ta3beer.blogspot.com/2013/05/narrating-city-interview-with-creator.html
 Olon'i Ejipta: https://www.facebook.com/HumansOfEgypt
 Olon'i Mansoura: https://www.facebook.com/HumansOfMansoura
 Olon'i Tehran, : https://www.facebook.com/HumansOfTehran
 Olon'i Esfahan: https://www.facebook.com/pages/Humans-of-Esfahan/613422665384065
 Olon'i Shiraz: https://www.facebook.com/hmnsofshz
 Olon'i Ahvaz: https://www.facebook.com/HumansOfAhvaz
 Olon'i Kermanshah: https://www.facebook.com/pages/Humans-of-Kermanshah/651868281535866
 Olon'i Istanbul: https://www.facebook.com/HumansOfIstanbul1
 Olon'i Ankara: https://www.facebook.com/humansofankara.com.tr
 Olon'i Izmir: https://www.facebook.com/humansofizmir
 Olon'i Antalya: https://www.facebook.com/humansofantalya
 Olon'i Tel Aviv: https://www.facebook.com/HumansOfTelAviv?ref=br_rs
 Olon'i Palestina. : https://www.facebook.com/HumansofPal
 Olon'i Nablus: https://www.facebook.com/pages/Humans-of-Nablus-%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3/490008117732394
 Olon'i Jeddah – Arabia Saodita: https://www.facebook.com/HumansOfJeddahKSA
 Olon'i LAU: https://www.facebook.com/humansoflau
 Olon'i Tripoli: https://www.facebook.com/HumansOfTripolilb
 Olon'i Beirut: https://www.facebook.com/HumansOfLeb
 Olon'i Amman: https://www.facebook.com/HumansOfAmman
 Olon'ny tanànan'i Koweït : https://www.facebook.com/humansOfKuwaitCity
 Olon'i Tonizia: https://www.facebook.com/pages/Humans-of-Tunisia/1450587795167309
 Olon'i Tunis: https://www.facebook.com/humansoftunis
 bilaogy : http://humansoftunis.blogspot.com/
 Olon'i Sfax: https://www.facebook.com/Humansofsfax
 Olon'i Khartoum: https://www.facebook.com/HumansOfKhartoum
 Olon'i Baghdad: https://www.facebook.com/Humans.Baghdad
 Olon'i Syria: https://www.facebook.com/The.Humans.Of.Syria
 Olon'i Dubai: https://www.facebook.com/pages/Humans-of-Dubai/189498107843551
 Olon'i Abu Dhabi: https://www.facebook.com/humansofauh
 Olon'i Tripoli: https://www.facebook.com/humansoftripoli
 Olon'i Benghazi: https://www.facebook.com/Ho.Benghazi
 Olon'i Casablanca: https://www.facebook.com/casablanca.humans
 Olon'i Alger: https://www.facebook.com/HumansOfAlgiers